Ọtụtụ ụdị ikuku iku ume nke ikuku ventilashị na-adịghị efe efe | Micomme
Ofdị ventilashị eji maka ọrịa dị iche iche. N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-eji ikuku ventilashị nke nwere otu ọkwa maka ndị ọrịa nwere snoring; Igwe na - eku ume ikuku abụọ nke ST maka ọrịa nkuume. Ọ bụrụ na ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya karị, ọ nwere ike ịdị mkpa iji ikuku ventilashị. Ofdị ventilashị eji maka ọrịa dị iche iche. Enwere ọtụtụ ụdị nke onye na-adighi ekupu ikuku. Ihe ndị a na-akọwa ọnọdụ nke ventilashị. You nwere ike ịhọrọ ventilashị na-anaghị efe efe nke kwesịrị ekwesị maka gị dịka ọnọdụ gị dị.
Onye na-eku ikuku nwere usoro CPAP, S, T, S / T, dịka ndị a:
1. Ọnọdụ CPAP nke ventilashị: ọnọdụ ikuku ikuku na-aga n'ihu dị mma
CPAP: Ọnọdụ ikuku na-aga n'ihu na-aga n'ihu — nrụgide ikuku ikuku na-aga n'ihu, onye ọrịa ahụ nwere iku ume dị egwu, onye na-eku ume na-enye otu nrụgide ahụ na usoro iku ume na ikuku iji nyere onye ọrịa aka imeghe ikuku. A na-ejikarị ya eme ihe maka ndị ọrịa nwere nsogbu mkpachi okpo iku ume nke OSAS, iku ume iku ume siri ike, ma ọ bụ naanị ntakịrị enyemaka site na iku ume. Enweghị trigger, ọ dịghị atụgharị, ahụ mmadụ na-eku ume n'efu, a na-achịkwa nrụgide ka ọ bụrụ nrụgide mgbe niile, na nrụgide nke usoro iku ume na ume iku ume. Nyere aka iku ume (nrụgide nrụgide bụ 0) + njikwa nrụgide bụ ọnọdụ a na-ejikarị nke ọma. Mmetụta anụ ahụ kwekọrọ na PEEP (nrụgide dị mma na njedebe zuru oke): bulie olu ihe mmapụta arụ ọrụ, melite nnabata; belata ike oriri, meziwanye mkpalite; mee ka steeti elu meghee steeti.
2. S ọnọdụ nke ventilatọ:
Ọnọdụ ikuku iku ume onwe ọnọdụ --- Ọnọdụ iku ume, onye ọrịa nwere iku ume ozugbo ma ọ bụ nwee ike ịkpali ventilashị ka ọ kpachara onwe ya, ventilashịan na-enye IPAP na EPAP, onye ọrịa na-achịkwa ugboro ole iku ume ya na oge iku ume ya N'onweaka Maka ndị ọrịa nwere ezigbo ume iku ume ma ọ bụ ndị ọrịa nwere nsogbu ihi ụra nke etiti. Ihe mkpali iku ume n'oge: Igwe iku ume ya na oge iku ume nke onye ọrịa na-emekorita nke ọma. Ọ bụrụ na iku ume nwa oge onye ọrịa ahụ, onye na-ekupụ ahụ na-akwụsịkwa ọrụ. Njikwa nrụgide (nrụgide mgbe niile): na-echekwa IPAP a na-echekwa eche (mgbali ikuku ikuku na-agba ume) na -akpata ikuku ventilaị, ma na-enwe nrụgide EPAP (nrụgide dị mma nke ikuku ikuku) na ikuku iku ume ikuku ọ na-agbagharị mgbanwe ikuku, ọ na-enyere iku ume aka + mgbali aka na-achịkwa, ma bụrụkwa usoro a na-ejikọkarị ọnụ.
Sepenti 30H Ventilator na-abụghị Invasive
3. Ọnọdụ nke ventilashị:
Ọnọdụ ikuku ventilasị T oge njikwa oge - ọnọdụ njikwa oge, onye ọrịa ahụ enweghị iku ume oge ma ọ bụ enweghị ike ịkpali ikuku nke ikuku na-eme ka ikuku nọrọ onwe ya, ikuku na-achịkwa iku ume nke onye ọrịa, na-enye IPAP (ezigbo ihe na-akpali mmụọ ịgbanye ikuku), EPAP (expiratory airgbọ ikuku dị mma na-agba mbọ, BPM, Ti (Oge mkpali / oge iku ume). A na-ejikarị ụdị ọnọdụ a maka ndị ọrịa na-enweghị iku ume ma ọ bụ nke ume iku ume adịghị ike. Ihe na-adọta oge: Onye na-eku ume na-arụ ọrụ ugboro ole ana - emegaghị eme ya, ọ na - emeghi ka ya na ume iku ume ya na onye ọrịa. Njikwa nrụgide (nrụgide mgbe niile): Nọgide na-echekwa IPAP a na-eme ka ọ bụrụ (nrụgide dị mma ikuku ikuku) na-akpali ikuku ventilasị, ma jigide ihe nrụpụta EPAP (ezigbo ikuku ikuku) na ikuku ventilashị nrụgide nrụgide oge nrụgide: njikwa iku ume + njikwa nrụgide, adịghị ọnọdụ ịwakpo adịghị ejikebe.
4. Ọnọdụ S / T nke ventilashị: